Fampahafantarana ny Affiliate - BikeHike
Famoahana ny fifandraisana ara-materialy: Ny sasany amin'ireo rohy ato amin'ity tranokala ity dia rohy mifandray. Midika izany fa raha manindry ny rohy ianao ary mividy ilay entana, ny tompon'ity tranokala ity dia hahazo komisiona mifandraika. Na izany na tsy izany, ny tompon'ity tranokala ity dia manome soso-kevitra fotsiny ny vokatra na serivisy izay hanome lanja ny mpamaky. Ny tompon'ity tranokala ity dia manambara izany araka ny voalazan'ny Federal Trade Commission 16 CFR, Fizarana 255: Torohevitra momba ny fampiasana fahazoan-dàlana sy fijoroana ho vavolombelona amin'ny dokambarotra.
Ity tranonkala ity dia mety manaiky ny endrika dokam-barotra amin'ny vola, fanohanana, fampidirana karama na endrika fanonerana hafa.
Ny tambin-karama azo dia mety hisy fiantraikany amin'ny votoatin'ny dokam-barotra, lohahevitra na lahatsoratra vita amin'ity tranokala ity. Io atiny, habaka dokam-barotra na lahatsoratra io dia mety tsy ho fantatra ho votoaty karamaina na tohana.
Ny tompon'ity tranokala ity dia mety hahazo onitra amin'ny fanomezana hevitra momba ny vokatra, serivisy, tranokala ary lohahevitra hafa. Na dia mahazo onitra noho ny lahatsoratra na dokam-barotray aza ny tompon'ity tranonkala ity, dia manome ny hevitray, ny zavatra hitanay, ny zavatra inoanay, na ny traikefanay momba ireo lohahevitra na vokatra ireo izahay. Ny hevitra sy ny hevitra aseho ato amin'ity tranokala ity dia ny mpanoratra ihany. Izay fitakiana vokatra, antontan'isa, quote na fanehoana hafa momba ny vokatra na serivisy dia tokony hohamarinina miaraka amin'ny mpanamboatra, mpamatsy na antoko resahina.
Ity tranokala ity dia tsy misy atiny rehetra izay mety hiteraka fifandirana mahaliana.
Fandavana ny programa Amazon Associates
bikehike.org dia mpandray anjara ao amin'ny Amazon Services LLC Associates Program, programa dokam-barotra mifandraika natao hanomezana fitaovana ho an'ny tranokala hahazoana saram-pandraharahana amin'ny alàlan'ny dokam-barotra sy ny fifandraisana amin'ny Amazon.com. Amazon, ny marika Amazon, AmazonSupply, ary ny marika AmazonSupply dia mariky ny Amazon.com, Inc. na ireo mpiara-miasa aminy.
Rohy Affiliate Amazon
Ny lahatsoratra bilaogy dia mety misy rohy mifandray amin'ny Amazon, izany hoe, raha manindry ianao ary mividy Now na misoratra anarana amin'ny programa Amazon, bikehike.org dia mety hahazo komisiona. Tsy misy sarany fanampiny aminao izany.